E nweghị nwanyị dị n'ụwa nke na-achọghị ka ọ mara mma ma mara mma. Ọrụ dị oke mkpa dị n'ime ịmepụta otu ụdị bụ mkpebi ntutu isi ejiji.
Oge a na-agba ọsọ na ọdịdị ya dị iche iche ma na-enye oge niile eji ejiji ntutu ọnụ 2012. Ha nwere ike ile anya, mara mma na ejiji mma. Uwe ntutu isi a na - eme ihe ọ bụghị nanị mma - ọ bụ ohere dị ịtụnanya maka nkeji ole na ole, iji gbanwee ntutu isi kwa ụbọchị iji edozi isi mgbede, inye ụda ma ọ bụ iji mesie agba nke ntutu.
Ụdị ntutu isi 2012
Nhọrọ nke ngwa ngwa ụmụ nwanyị dị nnọọ ukwuu nke na ọ na-ama oke oke ego ya. Omume na-emekarị nke oge ahụ bụ obere ntutu maka ejiji 2012, nke aji. Karịsịa ọgaranya, ha jikọtara ya na ejiji mara mma nke rhinestones.
Ọ pụghị ịhapụ ihe ọ na-eme na ihe ọhụụ nke ụdị ihe eji eme ya. Ọ wetara ejiji ndị dị otú ahụ, dị ka scallops. E ji nkume na rhinestones chọọ ha mma. N'otu aka ahụ, ọdịdị nke afọ ndị gara aga emewo ka ndị na-emepụta ihe ịmepụta ọla maka ntutu isi n'ụdị hoopa, bụ nke a pụrụ itinye nke kachasị mma n'ime mmachi ma ọ bụ okooko osisi. Na ntinye ihe omimi nke uzo di iche iche, na-eṅomi ihe di egwu.
Ihe kachasị njọ na afọ a bụ osisi ifuru na ntutu isi. Na ụdị dịgasị iche iche nke ntutu isi ndị a, na-enye ọhụụ ọhụrụ na ịma mma dị mma nye ndị inyom ọ bụla. Nnukwu anya na ntutu isi na-acha ntutu isi na-acha oji, na-emepụta ọdịiche dị iche iche ma na-emesi ịma mma nke ntutu. Site na ihe ịrịba ama niile, ifuru ga-anọgide na-achọ mma ịchọ mma ụmụ nwanyị kachasị mma.
Ịmepụta ụdị ntutu isi ugbu a chọrọ oge kachasị mma na mgbalị, mgbe ị na-eji ntutu isi maka ntutu isi. Igwe dị mfe, ga-enyere gị aka na nkeji ole na ole iji kpaa uwe gị n'ụdị 60s. Ị na-ekewapụ isi ntutu isi, ma na-eme ntutu isi, dozie ntutu n'okpuru. Ọkọlọtọ pụrụ iche agaghị ekwe ka ọ daa.
Ejiji ntutu ntutu
Nnukwu ụda ntutu isi. A na-eji akwa na akwa akwa nke textures dị iche iche mee ha. Ngwa ndị dị otú ahụ na-adọrọ mmasị maka ụmụ agbọghọ, na-eme ka ihe oyiyi ha dịkwuo nro ma mara mma.
Ihe a na-adịghị ahụ anya bụ aha ochie nke na-eji aka ya eme onwe ya. Ugbu a, ọhụụ ahụ bụ otu n'ime mkpebi ndị kachasị mma. Ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ọ na-eji okooko osisi atọ chọọ ya mma, mgbe ahụ, a ga-etinye ya na akwa akwa ifuru, nke sitere na obere okooko osisi dị na ọtụtụ obere anaghị ahụ anya na ntutu isi. Ma ọ bụ dozie ya n'akụkụ isi, nke yiri nnọọ mma nke ndị si n'àgwàetiti Hawaii.
Ebe mbụ n'etiti ngwa ntutu maka 2012 bụ ntutu isi Gris. Nke a bụ bandeeji nke nwere ike iji uwe ọ bụla na-eji ejiji na uwe ejiji. Ọ nwere ike ịbụ ụdị na ụdị dịgasị iche iche: sara mbara, warara, mma ya na brooches, okooko osisi, rhinestones, na ọbụna mee ha lace.
Ruo ogologo oge, ntutu isi na-agba agba, otu bezel metal nke kacha mma bụ ihe kacha mma. Ọ na-ekpuchi ntutu ma na-agụnye mpempe akwụkwọ kwadoro na-agafe n'etiti isi. Dika ihe eji eme kwa ubochi, okpukpu abua nke ihe di iche iche di iche iche di ka akpukpo, akwa, ihe nchikota, na ígwè di oke. Uwe, kụrụ site na mpempe mmiri, nwere ike ịkwado ya na studs. Nke a ga-enye ihu ọma na nlebara anya pụrụ iche.
A na-enye ụdị ntutu isi kachasị mma nke afọ 2012 n'ọtụtụ dịgasị iche iche. Iji mepụta ihe oyiyi pụrụ iche nke gị, ị ga - ahụrịrị ịchọta n'etiti ha ihe na-adabara gị.
Akpakasị akpụkpọ anụ ụmụ nwanyị - Mmiri 2016
Kedu akpụkpọ ụkwụ a na-ewu na 2014?
Mgbụsị akwụkwọ collection nke etemeete Chanel 2013
Novelties ke manicure 2014
Uwe mmiri mmiri 2015
Ejiji Agbamakwụkwọ - Ụdị 2015
Zhostovo eserese na mbọ
Swimsuits na 2015
Egwuregwu Ụmụ nwanyị 2014
Ụmụ nwanyị Jaketị - spring 2015
Baaba akpa 2015
Ejiji jeans - mmiri-okpomọkụ 2016
Demi Lovato oge ịse foto - 2014
Karịa ịnagide oké agot na nwata?
Melanoma nke anya
Deformation nke cervix
Uwe nwanyị maka ọrụ
Akpụkpọ ụkwụ na-ekwo ekwo na-eme nke ajị anụ
Ugg Australia - akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị, olee otu esi amata ọdịiche dị na akpụkpọ ụkwụ mbụ nke ịgha ụgha?
Bengal cat - agwa
Ugwu dị n'úkwù
Ejiji ejiji - ụdị mara mma na agba maka oge niile
Ọbọ ara nwa - uzommeputa
Indonesia - Nchedo
Azụ na ụlọ nsọ - ihe kpatara ya
Nta nke nkwonkwo nkwonkwo - enyemaka mbụ, usoro nchekwa na ụzọ ndị mmadụ si agwọ ọrịa
Ihe ngosi amara nke November
Kulesh - ntụziaka na-adọrọ mmasị nke efere oge ochie